Abatshatileyo/ufikelelo olukhulu kwi-Ikebukuro,Shinjuku/T05
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNomad
Indawo egqibeleleyo yokuhlala yamaqela amabini, izibini, amaqabane okanye abahlobo nje. Unokufikelela kakhulu kwi-Ikebukuro kunye neShinjuku. Phambi kwesikhululo sikaloliwe ungafumana isitrato esiphithizelayo sokuthenga kunye ne-mall enkulu, eneendawo zokutyela ezininzi onokuzonwabela. Amagumbi ahlaziywa ngokutsha kwaye mahle kakhulu, kwaye adityaniswe nezinto ezininzi ezinokonwabela ukuhlala kamnandi kunye nokukhululeka. Ungasebenzisa i-pocket wifi simahla kwaye uphume nayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Uhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo saseTokorozawa. Kukho indlela yebhasi esuka ngqo kwisikhululo seenqwelomoya saseNarita ukuya kwisikhululo saseTokorozawa. Ngokubhekiselele kumbindi wesixeko saseTokyo kukho ukufikelela okuhle kwi-Ikebukuro kunye neShinjuku, kunye nokufikelela okubalaseleyo kwisixeko saseKawagoe ngaphandle koko. Ibhedi e-1 ephindwe kabini kunye neseti ye-futon e-1 ibandakanyiwe, ngoko ke ukuya kuthi ga kwi-3 abantu banokuhlala kunye. Izindlu zangasese ziquka umsebenzi we-bidet.
Kukho indawo enkulu yokuthenga kunye neendawo zokutyela ezininzi ezahlukeneyo. Ewe zininzi izitayile zaseJapan. Unokonwabela ukutya kwaseJapan.
Umbuki zindwendwe ngu- Nomad
Siyakuvuyela ukukunceda ngayo nantoni na emalunga negumbi, malunga nobumelwane, kunye nendlela yokuya kwiindawo ezahlukeneyo ezaziwayo eTokyo, ke nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha.
Inombolo yomthetho: M110012902
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tokorozawa